Bilaogera voaheloka higadra noho ny fanamarihana ny politikan’ny teny ao Kazakhstan ho “tsy tia Rosiana” · Global Voices teny Malagasy
Saro-dazaina ny tantaran'i Kazakhstan sy ny fiteny-foko Rosiana
Voadika ny 07 Septambra 2021 4:25 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, English, Español, Ελληνικά, English
Yermek Taichibekov niresaka tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Ukraina.ru, mpampahalala vaovao mahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny fanjakana Rosiana. Pikantsary tao amin'ny YouTube.
Nanameloka ilay Kazakh bilaogera sady mpikatroka Yermek Taichibekov higadra fito taona ny fitsarana ao Almaty rehefa fantatra fa meloka izy noho ny “fandranitana adim-poko” tamin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao (Andininy faha-174 amin'ny fehezan-dalàna ady heloka bevava ao amin'ny Repoblikan'i Kazakhstan).
Nilaza ilay bilaogera mpomba ny Rosiana, izay notanana tamin'ny volana Septambra 2020, fa avy amin'ny resadresaka an-dahatsary tamin'ny volana Mey 2020 niarahany tamin'ny mpampahalala vaovao Rosiana Ukraina.ru, izay anisan'ny fampitam-baovao tohanan'ny fanjakana Rosiana mitantana ny Russia Today (Rossiya Segodnya) ny fiampangana azy. Tamin'ilay antsafa no nanehoan'i Taichibekov hevitra momba ny fifandonana misy eo amin'ny foko Kazakh sy ny Dungans (vondrona Miozolomana manana fiaviana Shinoa) ao amin'ny faritra Korday any amin'ny faritanin'i Jambyl any Kazakhstan.
Niteraka fahasimbana fananana sy trano miteti-bidy mihoatra ny 4,44 tapitrisa dolara amerikana ary famindrana olona eo ho eo amin'ny 20 000 manerana an'i Kyrgyzstan ny fifandonana Kazakh-Dungan tamin'ny volana Febroary 2020 .
Niresaka nanoloana ny sainam-pirenena mainty-mavo-fotsy an'ny ampira Rosiana (1858-1896) ilay bilaogera, fantatra amin'ny fanohanany ny fampiasana ny teny Rosiana ao amin'ny firenena, ka nilaza tamin'ilay mpanao fanadihadiana fa mitarika “fanaovan-dalàna tsy tia Rosiana” ny manampahefana ao Kazakhstan.
Araka ny voalazan'i Taichibekov, “nikaroka ireo olona Rosiana izay manohana ny fanakanana ny fahitalavitra Rosiana, mandràra ny fiteny Rosiana, sy ny fanalana azy amin'ny Lalàmpanorenana” ny fanjakana Kazakh. Nambarany ihany koa fa “natao hanalana baraka firenena hafa ny zava-drehetra” any Kazakhstan.
Efa voaheloka higadra efa-taona an-tranomaizina teo aloha ilay bilaogera noho ny “fandranitana adim-poko” tamin'ny alàlan'ny lahatsoratry ny tambajotra sosialy tamin'ny taona 2015. Tamin'izany fotoana izany, tsy niaiky ny helony izy ary niantso ny saziny ho “ambadika politika.” Tamin'ny taona 2017, navotsotra mialoha ny fotoana tokony hivoahany izy.
Tany am-piandohan'ny volana Aogositra, nitsikera ny manampahefana Kazakh i Yevgeny Primakov, lehiben'ny sampan-draharaha Rossotrudnichestvo izay manampy ny foko Rosiana monina any ivelany, noho ny “tsy nanamelohany ny fihetsiky ny nasionalista ao an-toerana,” taorian'ny tatitra mitantara ny bemidina notarihin'ireo nasionalista tany amin'ireo magazay, miaraka amin'ireo mpikatroka izay nanamarina raha misy marika entana nadika tamin'ny fiteny Kazakh sy ny hoe raha miteny Kazakh amin'ny mpanjifa ireo mpiasa.
Araka ny filazan'ny mpampahalala vaovao tsy miankina Eurasianet, Kuat Akhmetov, mpikatroka monina ao Kostanay, no nitarika ny mpanao fisafoana ny fiteny ary nitarika ny hetsika tsy ara-dalàna nataon'ny Kazakhs mitaky ny fampiasana ny fitenindrazan'izy ireo rehefa manjifa. Nivoaka tao amin'ny fantsona YouTube an'i Akhmetov, Til Maydani (Sahanadim-piteny) ny horonantsary mampiseho ny bemidina, ary efa nahasarika mpijery miisa 20 000 mahery.
Nampirehitra ny hatezeran'ireo vondrona nasionalista Rosiana ihany koa ny zava-nitranga. Niantso ny fisafoana tao Kazakhstan ho “tsy tia Rosiana” ny Tsargrad TV, avy amin'ny elatra farany havanana, fantsona mpomba an'i Kremlin, ary nampitaha izany tamin'ny hetsika nasionalista tao Okraina izay nampiasain'ny manampahefana Rosiana ho iray amin'ireo fanamarinana hanafihana ny firenena.
Namaly ny tsikera nataon'i Rosia tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra i Dauren Abayev, filoha lefitra voalohany ao amin'ny fitantanan-draharahan'ny filoha Kazakh, niantso ny bemidina ho “tsy rariny” ary nilaza izy fa fanaon'ny “lehilahy nasionalista nipoitra avy any anaty lava-bato” sady “tsy ekena no mahatezitra”. Nampanantena izy fa hanao fanadihadiana “araka ny rariny” ny mpitandro ny filaminana manoloana izany fihetsika izany.
Araka ny lalàm-panorenana Kazakh, samy fiteny ofisialy ny Kazakh sy ny Rosiana. Samy fiteny be mpampiasa any Kazakhstan izy roa ireo, nefa be mpampiasa any an-tanàndehibe sy any avaratry ny firenena ny Rosiana, izay matetika ahitana foko Rosiana no maro an'isa. Saingy, notendren'ny Lalàmpanorenana hampiroborobo ny fampiasana ny fiteny Kazakh ny manampahefana Kazakh, izay nahilika ho amin'ny sata ambany kokoa tamin'ny vanim-potoana Sovietika.